Manome Fahazoan-Dalana Amin’ny Mahampampita Vaovao ny Bilaogera i Filipina — Saingy Miahiahy ny Sasany fa Miezaka Hifehy Votoaty Antserasera ny Governemanta · Global Voices teny Malagasy
Manome Fahazoan-Dalana Amin'ny Mahampampita Vaovao ny Bilaogera i Filipina — Saingy Miahiahy ny Sasany fa Miezaka Hifehy Votoaty Antserasera ny Governemanta
Voadika ny 07 Marsa 2017 4:45 GMT
Fametrahan-dalàna ny media sosialy ao amin'ny lapan'ny tanàna. Sary avy amin'ny pejy Facebook-n'ny Biraon'ny Fifandraisan'ny Filoha
Mety hanome fankatoavana ho fitaratra ara-pampitam-baovao ho an'ny bilaogera sy ny mpamoaka lahatsoratra hafa amin'ny media sosialy ny fanjakana Filipina atsy ho atsy. Maro ireo nidera ny fanapahan-kevitra ho “dingana tsara mankany amin'ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena” saingy miahiahy koa ny hafa fa mety hanohintohina ny fahaleovantenan'ireo mpamoaka lahatsoratra nankatoavina amin'ny media sosialy ny tari-dalana natolotra mikasika ny fomba hidiran'ny bilaogera amin'ireo hetsika tohanan'ny governemanta.
Nikarakara hetsika Fametrahan-dalàna ny Media sosialy tao amin'ny Lapan'ny tanàna ny Birao misahana ny Fifandraisana amin'ny Filoha (PCOO) mba hanambaràna ny fananganana Biraon'ny Media Sosialy, hamoahana ny tari-dalana mikasika ny fomba ahafahan'ny mpiasan'ny PCOO mampiasa ny media sosialy sy maka ny hevitry ny vahoaka momba ny lasitrasa hahazoana fankatoavana amin'ny media sosialy.
Tamin'ny volana lasa teo, nanaiky ny fitakian'ireo mpanohana azy amin'ny aterineto ny Filoha Filipiana Rodrigo Duterte mba handrakitra ny zavatra ataony ao anatin'ny lapan'ny filoha. Nitarika adihevitra izany raha afaka manone fahazoan-dalana ho media ho an'ny bilaogera ny fanjakana. Efa natolotra nandritra ny fintantanana teo aloha ihany koa izany saingy nolavina rehefa nanonona ny olan'ny tamberin'andraikitra sy ny maha matihanina eo amin'ireo bilaogera sy ny mpiserasera hafa ny vondrona fampahalalam-baovao mahazatra.
Hahazo fidirana maimaim-poana amin'ny hetsika sy zavatra karakarain'ny PCOO ireo bilagera nahazo fahazoan-dalana. Ho ampidirina lisitra andefasan'ireo programam-pirotsahana an-tsitrapon'ny media sy ny sampandraharaha mailaka ihany koa izy ireo.
Nandritra ny Fametrahan-dalànan'ny Media Sosialy tao amin'ny Lapan'ny Tanàna, noresahan'ny PCOO ny drafi-taridalana fahazoan-dalana ny bilaogera. Afa-mangataka fahazoan-dalana ireo bilaogera sy ireo mpamoaka lahatsoratra amin'ny media sosialy manana mpanjohy 1 000 farafahakeliny. Tsy maintsy manana fahaleovantena amin'ny fanoratana lahatsoratra izy ireo, voaràra tsy mahazo manohana vokatra ara-barotra ihany koa izy ireo, ary tsy maintsy manaraka ny fitsipi-pitondrantenan'ny PCOO. Ary marihina manokana fa tokony tsy hampiasa teny “manafintohina, mampiady sy mihantsy” izy ireo. Fanampin'izany, tokony hamoaka izay fanambarana an-gazety sy filazana rehetra ataon'ny PCCO ireo bilaogera nankatoavina.
Afisy antserasera manambara ny Fametrahan-Dalànan'ny Media Sosialy ao amin'ny Lapan'ny Tanàna. Sary tao amin'ny pejy Facebook'ny Sampam-baovaon'i Filipina.
Tamin'ny fanambarana an-gazety, nilaza ny antony mahatonga ny fanjakana namolavola politikan'ny [na fametrahan-dalànan'ny] media sosialy i Martin Andanar, Sekreteram-pifandraisan'ny Fiadidian'ny Filoha :
Ao anatin'ny fotoana mahaliana tianay hahagovana kokoa noho ny hafa ny bilaogera izahay… Firohotan-javatra tsy maintsy raisina sady azontsika fehezina ihany koa izany
Danilo Arao, mpampianatra momba ny asam-pampitam-baovao, nanatsonga ity fomba fiteny ity tamin'ny tsikerany momba ny politikan'ny media sosialy nataon'ny governemanta:
…lasa fikasana mampiahiahy amin'ny fanarahamaso ny votoaty antserasera ny fihetsika lazaina fa tsy mampidi-doza amin'ny fanomezana alalana antsitrapo.
Nanasokajy ny drafitry ny taratasy 10 pejy ho antonta-taratasy “manompo tena mikasa hanao ho mpitondra teny ireo mpiserasera media sosialy nahazo alalana” izy.
Nanazava bebe kokoa izy fa mety hanakana ny bilaogera tsy ho mpitati-baovao mpitsikera sy mahaleotena intsony ny drafitra:
Mahatonga indrindra ireo nahazo alalana ho mpitondratenin'ny PCOO izany. Ary raha dinihana ny ao anatin'ny tari-dalana fa tokony “tsy hampiasa teny manafintohina, mampiady sy mihantsy izy ireo» (PCOO, 2017, p.7), dia hita mazava fa tsy azo ekena ny hevitra mifanohitra raha tsy izany mety ho raisina am-pahadisoana fa mihantsy.
Nanitrikitrika i Noemi Lardizabal-Dado, mpandray fitenenana tao amin'ny lapan'ny tanàna, fa tsy tokony ho takiana amin'ny bilaogera ny hamoaka ny zavatra nolazaina na nataon'ny manampahefam-panjakana:
…tsy resaka fizarana fanambarana an-gazety toy ny andraikitray izany. Manana saina mahaleotena ny bilaogera ary manana fahalalahana hisafidy izay fanambarana an-gazety hozaraina na horesahina.
Antonio Contreras, mpandray fitenenana hafa tao amin'ny lapan'ny tanàna, nampahatsiahy ny governemanta ny voka-dratsin'ny fifehezana akakiky ny mpiserasera media sosialy:
Ny fotoana hanombohanao hifehezana azy (media sosialy), no hanerenao azy.
Nampitandrina i Trixie Angeles, bilaogera, fa ny fitsipi-pitondrantena natolotra dia mety hanakana ny famoronana sy ny fahalalahan'ny bilaogera:
Tena mampiahiahy ity fitsipi-pitondran-tena ity. Tahaka ny ‘wild, wild west’ [kinaoly-tsy voafehy, andrefana kinaoly] ny media sosialy. Raha morontsiraka atsinanana tena madio ny fampitam-baovao mahazatra, izahay kosa no andrefana kinaoly-tsy voafehy. Ny antony mahatonga anay hahataka-davitra tsy voafehy dia noho izahay malalaka amin'ny fanehoan-kevitra.
Nilaza hevitra mitovy amin'izany i Tess Termulo, bilaogera hafa nandray anjara tamin'ny hetsika,:
Inona no mety heverina fa “manafintohina”? Heverina manafintohina ve ny fahatsapana fanafintohinana? Miaraka amin'ny tohan-kevitra anaty aterineto, mora ny mety ho “tafintohina”.
Mino aho fa maneho ny fahalalahan'ny bilaogera ihany koa izany mba haneho hevitra kokoa amin'izay avoakan'izy ireo tsy tahaka ireo mpanao gazety mahazatra izay manaraka ny fitsipika etika henjana kokoa. Satria endriky ny fanehoan-kevitra ity izay tsy maintsy ampiharin'ny mpanao gazety mahazatra ao anatin'ny fifehezan-tena, anjaran'ny bilaogera ny mahay maneho ny fihetseham-pon'ny olom-pirenena.
Anisan'ireo nanatrika ny tao amin'ny lapan'ny tanàna ireo bilaogera mpomba an'i Duterte izay voalohany nomena tombontsoa hanao antsafa amin'ny filoha tao anatin'ny Lapa Malacanang. Anisan'ireo vondrona bilaogera nanango-tsonia hahazoana ilay fanomezana alalana avy amin'ny governemanta ihany koa izy ireo.
Indreto ireo fanehoan-kevitra sasany tao amin'ny Twitter mikasika ny lanonana:
Fandraisana andraikitry ny olom-pirenena, fa tsy famoaham-baovao, no tian'ny olom-pirenena hidirana. Domberina ho an'ny governemanta, fa tsy fananganam-baovao no ivon-dresaka.
#AllMediaPH ity fihetsika ity dia mampifangaro ny fahazoan-dalana sy ny fametrahana vondrona media sosialy. Mariho izany.
Nahavita namory ireo bilaogera liana hanatevin-daharana ireo mpanao gazety hafa hitatitra ny lahasan'ny filoha ny lapan'ny tanàna. Nahafahan'ny governemanta namaritra ny hevitry ny bilaogera momba ny politikan'ny media sosialy natolony izany. Marobe ireo indrokely ao amin'ny votoatin'ny antonta-taratasy, saingy soa ihany fa nilaza ny PCOO fa handinika ny sosokevitra sy ny fomba fijery nolazaina tao amin'ny lapan'ny tanàna. Hamoaka ny fanavaozana ny fitsipika amin'ity volana ity ny birao.